व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन क्षेत्रबाट व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न अग्रसर छौं | Vetkhabar
Home Breaking News व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन क्षेत्रबाट व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न अग्रसर छौं
१८ पुष २०७६, शुक्रबार ०१:०९
नेपालको वर्तमान पशुपालन प्रणालीलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
हाम्रो पशुपन्छी पालन पेशा परम्परागत प्रणालीमै आधारित छ । अब यसलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने चुनौती छ । व्यावसायिक पशुपन्छी पालन गर्ने चेतनाचाहिँ बिस्तारै हामीमा आउँदै छ । केही प्रयासहरू पनि भएका छन् । तर, ती पर्याप्त छैनन् । त्यसो हुँदा हामीले हुँदै गरेका व्यावसायिकताका प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्ने र अझै व्यवस्थित र विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था छ । धेरैभन्दा धेरै मासिसलाई संगठित गरेर ठूलो परिमाणमा उत्पादन लिने गरी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालनको अवधारणामा अघि बढ्नुपर्ने छ ।
नेपालका कतिपय राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू पनि जीविकोपार्जन वा व्यावसायीक कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएको पाइन्छ । यो क्षेत्रसँगको यहाँको कस्तो सम्बन्ध छ ?
म किसानकै छोरो हुँ । मेरो परिवारको परम्परागत पेशा अन्य नेपालीहरूको जस्तै कृषि नै हो । मेरो आफ्नो व्यक्तिगतरूपमा कृषिप्रति अगाध रुचि छ । कृषि प्रबद्र्धनका लागि मैले पनि केही प्रयास गरेको छु । तर, राजनीतिक प्राणि भएकोले मैले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहन सकेको छैन । मैरै पहलकदमीमा हामी ५१ जना मिलेर ५१ विगाहा जमिनमा सामूहिक कृषि व्यवसाय सुरु गरेका थियौं । मोरङको तत्कालीन बगैयाविर्ता गाविसमा सुरु गरिएको उक्त सामूहिक कृषिअन्तर्गत माछापालनका लागि पोखरी खनिएको थियो । अन्य कृषि उपजहरूसमेत सुरु गरिएका े थियो । तर, चुनाव भयो । म मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएँ । त्यसपछि कुनै निजी व्यावसायिक संस्थाको प्रमुख बसिरहनु हुँदैन भनेर मैले राजिनामा दिएँ । मैले राजिनामा दिएपछि चलाउने मान्छे कोही नभएपछि साथीहरूले बिक्री गर्नुभयो । अहिले उक्त सामूहिक व्यवसायीक कृषि फार्ममा नयाँ टिम आएको छ । उहाँहरूले पनि राम्ररी अघि बढाउनु भयो भने त्यसले उहाँहरूलाई र समग्र देशकै लागि केही लाभ दिन्छ भन्ने लागेको छ ।
तपाईँ सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यो मन्त्रालयले रोजगार प्रवद्र्धन गर्न नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी पालन क्षेत्रमा के कस्तो योजना अघि बढाउने सोच छ ?
कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमै काम गर्ने विषय मन्त्रालय मेरो होइन । तर, पनि रोजगार सिर्जना गर्ने मेरो मनत्रालयको जिम्मेवारी पूरा गर्न मैले यस क्षेत्रलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको छु । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । कृषि क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, सीपमूलक तालिम कृषि क्षेत्रमा अलि बढी सञ्चालन गर्ने र आवश्यकता हेरेर कृषि जनशक्ति उत्पादन गर्न सिटिइभिटीसँग पनि हामी सहकार्य गर्दैछौँ । र, किसानका समस्या समाधान गर्न कृषि मन्त्रालयसँग समन्य गर्ने कामलाई पनि मैले अगाडि बढाउने छु । किसानका लागि मुख्यतः उत्पादित वस्तुका लागि बजारको समस्या छ । उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने अर्को चुनौती छ । यी दुवै चुनौतीको सामना गर्न कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय र सहजीकरण गरेर हामी अघि बढ्दै छौँ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन, व्यावसायिक कृषि प्रणालीलाई अघि बढाउन र कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्न मूख्यतयाः कृषि बालि तथा पशुपन्छीमा लाग्ने रोगकिर ासँग लड्ने औषधी आवश्यक छ । यस्ता औषधीको सहज आपूर्ति व्यवस्थालाई कुन रूपमा हेर्नु भएको छ ?
हामीलाई जुन मात्रा र गुणस्तरमा कृषि तथा पशुपन्छी औषधी आवश्यक छ, त्यो उपलब्ध हुन नसकिरहेको अवस्था छ । हामीले आफैँले उत्पादन गर्न नसक्दासम्म बाहिरबाटै आयात गरेर प्रवन्ध गर्नुको विकल्प छैन । आयात गर्नका लागि पनि सहज वातावरण बनाउने जिम्मेवारी भने प्रदेश तथा केन्द्र सरकारको हुन्छ । देशभित्रै त्यस्ता किसिमका औषधी उत्पादन गर्नेतर्फ पनि हामी अधि बढ्नु पर्ने अवस्था छ ।
नेपाल पशुपन्छी औषधी व्यावसायी संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न आगामी पुस ४ र ५ गते यहाँहरूकै प्रदेश राजधानी आर्थिक नगरी विराटनगरमा देशैभरबाट पशुपन्छी औषधी व्यवसायकिा प्रतिनिधि भेला हुँदै छन् । व्यावसयीलाई यहाँको सन्देश के छ ?
हामी लामो राजनीतिक अधिकार प्राप्तीको लडाइँबाट अब समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढेका छौँ । नयाँ नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने हामी सबैको सामूहिक अभिभारा भएको छ । यो अभिभारा पूरा गर्न समाजका विभिन्न समुदाय, व्यवक्तिहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसमा पनि पशुपन्छी औषधी व्यवसायीहरूको भूमिका समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण छ । मुलतः उहाँहरूले गुणस्तरीय औषधीको प्रवन्ध गर्ने, सर्वसुलभ रूपमा औषधी उपलब्ध गराउने, सुलभ मूल्यमा औषधी उपलब्ध गराउने र गुणस्तरीय औषधी उपलब्ध गराउने उहाँहरूको दायित्व हुन्छ । यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नु पनि अनिवार्य रहन्छ । त्यसो हुँदा यो जिम्मेवारमिा
विराटनगर अधिवेशनबाट चयन भएर आउने पशुपन्छी औषधी व्यवसायी संघको नयाँ कार्यसमितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् । मेरो यही अपेक्षा र आह्वान छ ।
Previous articleदाना उद्योग संघका अध्यक्ष नै प्रतिबन्धित औषधीका आयातकर्ता
Next articleपशुपन्छी औषधीको नियमन गर्ने गरी औषधी ऐन २०३५ को परिमार्जन हुँदैछ
भिटामिनकाे नाममा पानी बेच्दै पशुपन्छी औषधि व्यवसायी ढकाल (ल्याब रिपोर्टसहित)
सरकारी विभागबीच नै कुरा बाझियाे : एउटा भन्छ– मासु नखानू, अर्को भन्छ– खानू !, अन्याेलमा उपभाेक्ता
प्रदेश–२ की कृषि सचिव डा. काफ्लेमाथि भएकाे दुर्व्यवहारप्रति भेटेरिनरी एसोसिएशनको आपत्ति
कृषि र पशुपन्छीको संयुक्त सेवा कार्यालय स्थापनाको विरोधमा ७ संगठन
पशु क्वारेन्टाइन बेलहीया चेकपोष्टद्वारा साउनमा मात्रै १७ हजार कुखुरा नष्ट
माछा, मासु, अण्डा र दुध सेवन गर्दा कोरोना भाइरस सर्ने हुँदैन...